Boxe olympique : Mitaky ny fialan-dRabarisoa Herimamy ny komity mpitantana | NewsMada
Boxe olympique : Mitaky ny fialan-dRabarisoa Herimamy ny komity mpitantana
Taorian’ny filazan’ny filohan’ny federasiona ady totohondry (FMBO), fa efa nesorina tamin’ny toerany, Andriamanampisoa Gege Bosco, avy hatrany dia nanatanteraka fivoriana ny komity mpitantana ka mitaky ny fialan’ny filoha.
Manome 72 ora an-dRabarisoa Herimamy, filohan’ny Federasiona malagasin’ny ady totohondry (FMBO), hametra-pialana ireo komity mpitantana nivory, omaly. Antony ny fahatsapan’izy ireo fa tsy vitan-dRabarisoa Herimamy, ny andraikitra maha filohan’ny federasiona azy sy ny tsy fahaizany mitantana izany rafitra izany.
Nanaporofo izany hoy ireo komity mpitantana, ny tsy nahavitany nanangana ny birao mandrafitra ny federasiona, roa taona taorian’ny nahalany azy. Tsy nisy ihany koa tao anatin’izany fotoana izany, ny fifaninanam-pirenena. Noho ireo rehetra ireo, nitaky ny hamerenana an’Andriamanampisoa Gege Bosco, ao amin’ny federasiona ireo ligim-paritra.
Araka izany, natao ny fivoriambe, ny volana novambra 2016, teo anatrehan’ny Komity olympika malagasy sy ny minisiteran’ny Fanatanjahantena, izay nanome fankatoavana ny tapaky ny fivoriambe. Taorian’io, tafajoro ara-dalàna, ny komity mpitantana mandrafitra ny federasiona, izay nahazo “certificat de conformité”, ny 9 desambra 2016.
Niasa avy hatrany ny federasiona, ka nanatanteraka “inter-ligue”, tany Toamasina, ny 18 desambra 2016 sy ny tany Amoron’i Mania, ny febroary 2017, notarihin’Andriamanampisoa Gege Bosco. Notontosainy ihany koa ny fifaninanam-pirenena 2016 – 2017, tsy vitan-dRabarisoa Herimamy.
Nampitaraina ireo komity mpitantana ihany koa ny tsy fahitana ny filohan’ny federasiona, tamin’ny fampivondronana ny ekipam-pirenena, natao tao amin’ny ANS Ampefiloha, nandritra ny 1 volana sy tapany, teo amin’ny fanomanana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Ankoatra izay, tsy afaka niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, natao tany Hambourg Alemaina, ihany koa ny Malagasy, noho ny tsy fahampian’ny fifandraisana iraisam-pirenena. “Porofon’ny tsy fahaiza-dRabarisoa Herimamy miasa izany”, hoy i Gege Bosco, izay mbola nanamafy fa izy no filoha lefitry ny federasiona malagasin’ny ady totohondry.